DAAWO VEDIO: Somaliland Oo Bahdishay Madaxweyne Farmaajo Iyo Gaas, Kuna Hanjabtay Dagaal Culus | Marqaan News Agency
DAAWO VEDIO: Somaliland Oo Bahdishay Madaxweyne Farmaajo Iyo Gaas, Kuna Hanjabtay Dagaal Culus
Published on January 14, 2018 by dahir · 22 Comments
Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Somaliland ayaa saxaafadda kula hadlay Hargeysa, wuxuuna ka hadlay arrimo badan oo dhanka Tukaraq ku saabsan sidoo kalena wuxuu u gafay madaxweyne Farmaajo iyo hoggaamiye Gaas.
Wuxuu sheegay in Farmaajo uu yahay shaqsiga hurinaya dagaalka Tukaraq, islamarkaana uu doonayo in la laayo shacabka Somaliland, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Sidoo kale wuxuu sheegay in Gaas aanu u aqoonsaneen madaxweyne balse yahay guddoomiye, waajibna ahayn inuu la hadlo Somaliland, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Waxa uu tilmaamay sidoo kale, in dagaal ay diyaar u yihiin xilli walbo, islamarkaana ay awood u leeyihiin in magaalooyin badan oo hor leh tagaan.
Habar fadhiida laaqdan la fuududa. Kkkkkkk Hbaryoyinkan meeshan ka nacnacley maa ayaga inay Tukaraq qaabsadayn miye moodeen. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Somali oo dhan ba oog cidda Laascasnood gacanta ku dhiigay. Habroyiinka marku dagaalka dhamaado bay yimaadan. Maantana waxey maareysa iska daay Puntland inay aflaagaadayan Madaxweynaha umaada Soomaaliyeed oo ah Madaxweynaha ayaga masuulka ka ah markay noqooto arimaha dibaada quseeya umaada Soomaaliyeed. Kkkkkkk. Waxaana habroyiinka kiibriyeey waa beesha Dhulbahante.
KU:Ina habar Xabuusheed (xaaji Salax).
La yaabi mahayo dhaqan xumadaada.Waayo waxaa saas ah meeshaad ka soo jeedid.Adigoo ah Ina Habar xabuusheed ma ahayn in aad xumaan ku sheegtid dad ah PURE SOMALIS.
Waliba intaas waxaa kuu sii dheer badawnimada ad caanka ku tahay.
Maansha Allaah. Adigu waad na dhaantaa. Ana insha Allaah doorka danbe ayaan isku dayi doonaa inaan kaadhkagii muwaadinimada soo qaato oonan codeeyo. Ololahan wacdaraha ahna soo arko. kkkk
sxb marka aynu faanka iyo faataabakhda ka nimaadno, oo aynu runta abaarno, xaajadu maanta wey murgacantahay. Murgacaas maxaa ka danbeeyase waa in la’is weydiiyaa? Kasoo tag su’aashaas imika. Maanta iyo dharaaraha soo socda dhowr arimood ayuunbey xaajadu kusoo dhamaan.
Kolka hore yaanan la’iloobin in maanta aanan rabitaan dagaal loo heynin. Wakiilka Qaramada Midoobay Hargeysa waakii judhiiba tegay ee Somaliland kacodsaday inay xaajada qaboojiso. Isla Maalintaas Gaas iyo Farmaajona Garoowe ayay joogeen oo iyagana dabcan wuu la hadlay. Kolkaas hadii aduunweynaha damacooda iyo hadalkooda la raaco, weedho ayaa la’isku tuur tuuri dabadeedna xaajadani wey iska bakhtiyi. Aniga sidaan qabo xaajadi sidan inay u dhamaan doonto ayay iila egtahay.
Puntland iyo xulufadeedu iyaga oo maqiiqan ayay Somaliland gondaha is dari oo halkaas waxa ka dhici dagaal aanan waxba la’sikula hadhin. Kii roonaadaana reerka wuu u hadhi. Somaliland wey is hubtaa. Puntlandse ma’ishubtaa. Allaahu aclam. Dhan ay u dhacdoba filo in aanan lakala dheefi doonin.
Puntland oo ka waabata dagaal ay kelideed fool ka fool Somaliland Ciidamadeeda kusoo qaado, Nabadna diida, laakiinse gundhisa naaskan ay baryahanba salaaxaysay oo ah inay kiciso Dhulbahante. Taas oon filayo inay tahay tay Puntland ugu jeceshahay, waayo waxa ka maag maagina dagaal toos ahi waa iyada oo la cid ay dagaal geliso ama ha taageerto ama yaanay taageerine. Damacan ama arintani anigu sidaan qabo suurto gal ma noqon karo. Waayo Dhulbahante in badani Somaliland ayay la jirtaa. Intii ina Galeydh la socotayna dhanka Somaliland ayay sida Caliba ugu janjeedho ugu janjeedhaa. Inta yar ee Puntland la jirtaana dagaal diyaar uma aha. Sida keli ah ee inta aadka Somaliland uga soo horjeeda oo badankoodu reer Buuhoodle yahay ayaa la yara kicin karaa, intaas yarina meel badan ma gaadhayaan oo iyagiibaaba qirinqiiro iyo difaac markoodii horeba ku jiray. Siday doontaba ha’ahaatee wadadani mid ay Puntland ku dheefi doonto ma’ahan waayo nabadna usoo jiidi meyso dagaalna wax uga tari mayso.
Ta aan anigu ugu jecelahay waa iyada oo Puntland aqoonsato in ay Somaliland ka dhab tahay inay xuduudaheeda gaadho. Ayna rabto inay si nabad ah ku gaadho. Taasoo lagu heli karo uun, Puntland oo yiqiinsata in marka hore aanay xukumin Sool iyo Sanaag. Afka sheegashona ay ka aheyd. Nabaduna ay qaali u tahay cid walba. Dagaalkuna ay iyadu u nugushahay oo Garoowe duleedkeeda la fadhiyo. Dabadeedna kontorolkeeda ka sameysata xadkeeda dhexdiisa. Somaliland iyo Puntland ku heshiiyaan in aanan ciidamo la dhigin xuduuda. Isku socodka iyo ganacsigu isku furnaado sidii uu horeba u ahaa. Laakiinse xariiqdaas aanay kasoo gudbin. Saasna nabada iyo caanahana lagu maasho.
Waan ogsoonahay in kiniinkani aad ugu qadhaadhaandoono Puntland. Laakiinse dawo qadhaadh looma diidee waa inay fahantaa in ay tahay dawga keli ah ee lagu wada najixi karo.
Dhanka siyaasda hadaan usoo noqdona, dee way sii jiraysaa. Somaliland iyo Soomaaliya oo ay Puntland ka mid tahay way wada hadli doonaan. Xaajadana meel ayaa lagu tiirin doonaa goortay doontaba ha’ahaatee.
Illaahay taas dhan walba ha garansiiyo.
ka raali ahaada qoraalka dheer ee isku dheg dhegan.
Waan qodobeeyay oo numbers isticmaalay. Laakiinse webkan ayaa weli aanan si wacan wax loogu qori karin.
Ahmedow: Muuse Bixi” Nin dagaalyaqaan” kuma Dego Dagaal halkaa waxaa igaga muuqda muuse Bixii (wixii aad ka sheegi jirteen ayaa maanta ii Muuqda. (nin dagaalyaqaan boowe kuma Degdego”(gardaro Qaawan ayaan u arka
Duullaanka la doonayo in la iskaga horkeeno
Beelaha walaalaha (ahmedoow Caqligu waa inuu shaqeeyaa.
1)Guri Aad Lahayn ayaan ku Dagaalamayaa?
2)Dadka Deegaanka Dagan Waxaa waajib ku ah
(inay jihaadaan” Taasi weeye Caqabada somaliland heysta.
3)Dagaalka oo waji kale Yeesho” dagaal sokeeye oo aan dhamaaneyn ka dhaco.
4)ETHIOPIA OO LA WAREEGI DOONTO DEKEDA BERBERA & BOOSAASO, HARGEYSO, GROOWE BURCO, LAASCAANO, BUUHUUDLE LAGA SAMEYSTO
SALDHIG MILITARY(MILITARY BASE)WAAD DOONTAA.(OOHINTA ILMADA IGA DHEH MAANTA)
Mingis tume war anagu mafane ficilkanu qabanaa sxb hadad wax isla haysaan almaydaanu waasic kaalaya garoonka, maqlay inaad walawayn iyo eelayna soo urursateen,xataa oromana soo kaxaysta,kkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Marka hore soo baro sida saxda ah ee loo qoro far-soomaalida saxda ah.Marka labaad adiga iyo inta kula rayi ah waxaad u ooman tahiin dagaalo sokeeye waadse arki doontaan waxaad ka heshaan.Faan iyo istu-tus baad caan ku tahiin.Banaanka soo dhiga waxaad haysaan.Waxba ha la harina.
Ahmad wan kaa qaday bro waxan ku maqna wati doorasho lagalay,lkn sxb iminka wan soo noqday
xaji saalax:. ahmed Aqoonyahan prof:ahmed cawada suldaankey suldaanada geeska & africa
weeye ninkaas ahmed cawad runta shakhsiyan
waa nin bulshada dhexdeeda ku leh sumcad &
sharaf & karaamo”). xaaji saalax waa nin saaxiibkaa ah in aad isfahamtaan baa ka wanaagsan ogoow xaaji halkaan waa lagu kaftamaa laakiin ogoow Dadku waa Duul-wada Dhashay dhamaanteen, isaaq, Daarood, HAWIYE HA AHAADO(DADKU WAA WALAALO”)SIYAASADA WAALAN BAA DADKII FIICNA (AAFEEYEY)OO KALA EERDHEEYEY UMMADDII WADA-DHASHAY ISKU DHAQANKA AHAA.
Aad baan la’isku tebay intii lakala maqnaa. Reer marqaana weyisku yara khalkhaleen oo xertii ku xidhneydba hawada ayay mudo kasaareen oo waxaaban is lahaa haday soo rogaal celiyaan oo ay fikrad dhiibashada furaan rag badan baan dib loo arki doonin. Maantase hadii la’isku soo noqday waa Alle mahadii. Inkasta oo aynu isku soo noqonay inagu oo madaxa iskula jirna. Salaanta iyo xafiiltanku way wada socdaan eegadan. kkkk
Ma hubtaa saaxiib in Somaliland kala qoqoban tahay maanta, mise waxa aad run u qaadatay kutiri ku teenka meelahaas weligeedba lala meeraysanayay?
Mise hubtaa ina Gaas oo Farmaajo u diiday inuu dhagax dhigo wadadan muranku ka taaganyahay isaga oo ka baqaya in Ciidamada Somaliland soo weeraraan waftiga Farmaajo ama Garoowe inuu maanta dagaal fool ka fool ah Somaliland kusoo qaadayo?
Mise xaajadu siday u’egtahay ma fahansanid in ceelalyowga iyo dhawaaqyadaas soo baxayaa ku wajahan yihiin beesha Dhulbahante oo Somaliland la doonayo in laga soo horjeediyo?
Caaqil Ahmed aqooyahan sanad wanaagsan boowe
seetahay salaan gobeed waan idiin xiisay rag yahayoow xagge ka baxdeen beryahaan.
kkkkk C/weli Cawaro waa badhasaab labo gobol loo dhiibay oo madaxweyne is mooday. kkkkk
Farmaajo markay Gaalkacayo isla joogeen yaa daawaday?
Bodiumka way la fuuleen markii uu salaan sharafta qaadanayay. Markay socdeena hareeraha ayay ka socdeen. Socodkiisana wey isku ekeysiinayeen. Xitaa talaabada ayay isku meel la dhigayeen. kkkk
C/weli labada kale wuu ka gaaban yahow oo talaabada wuu dhaadheereysanayay. Waxa la moodayay inuu ama jimicsanayo ama waadh waadh sanayo. kkkkk waan ku qoslay. Siday xitaa gacmaha isla meel ugu hayaan. Waxa la moodaa inay gacmaha is heystaan sadexdoodu. kkkkkkkk
Waa Badhasaabyadii madaxweynayaasha is mooday ee hadana gaadhi kari waayay.
Adigu lab iyo Dhadig midna ma tihid.Waayo hadalkoodana waad leedahay.Markastana qofkasta qoraalka uu soo qoray baad ku raacdaa.Miskiin yahoow adigu rayi ma lihid miyaa?Badaw yahoow ninkaad caayeysid waa ninka dadka madoow ee adduunkaan ku nool ugu shasahaado weeyn uguna aqoon badan.Badaw yahoow khashiinka ka sii ah dadka kala baro.Af caytama adiguu kugu yaal.Yaa kaaliita adigaas khashiinka ah ee intaas cayda iyo anshax xumada la soo kalaha.Doqon yahoow ilkaha daxashaaleh yaa kaa xun oo ad xumaan ku sheegaysaa.
SOMALILAN DIRTA WAQOOYI DAANDAANSI BADANAA
ADKAYSI DARAANAA MARKII FOODA LA IS-DARO
Ciidamada Barakeysan ee Commondoos Geeska AFRICA (PUNTLAND MILLITAR ARMY FORCE
WAXAY WACAD KU MAREEN IN AY SOO AFJARAAN
XADUUDA DIRTA WAQOOYI LA WADAAGAAN MAANTA.
1)MUUSE BIIXI OO JARTO KU XUN TAHAY HADDII
PUNTLAND DAGAAL LA GALO WAAYO (ISAAQ DHEXDIISA AYAA KHILAAF KA DHEX JIREAA OO TAAGEERADII DAGAAL OO WEYN DOONO.
2)HABARJECLO” OO CULEYS SAARAN HADDII DAGAAL DHACOO SABABTA KHASAARAHA INTA BADAN IYAGEY GAAREYSAA (SZERO GROUND).
HABARAWAL ONLY MA GALI KARTA DAGAAL AAN ISAAQ U DHAMEYN WEY OGYIHIIN INEY KU JABAYAAN (AWOOD CIIDAMADA PUNTLAND LEEYIHIIN OGEED.(INSHA-ALLAH WEY XADUUDKA
PUNTLAND EE HARTI (WAA MUQADIS WALOOW SHALAY LA DAYAC IN MAANTA BOORKA LAGA JAFO
MUDAN BECAUSE(DHAX-AWOOWE WEEYE.
Salaan sharafle sxb. Kulan wanaagsan.
ASC. Welcome back. Waayo waayo laguma arkin. Xageed ka dhacday nin yahow?
Aad iyo aad ayaan kuu salaamayaa sxb.
Mingistume sxb waan kaqaday salanta war beryahan meesha waan ka maqnaye,habartii cawado ee wareersanayd ban xalay meesha ugu imid
xaaji saalax asalaamu caleykum waraxmtuhaahi wabarakaat. salaan gobeed boowe”.
Ciidamadaan naga kaxeeya aanu iska qayilee hadalkiisu waa intaa
Gudoomiye gaas kkkkkkkkk,waa ku habon yahay marki horeba shaadh kawaynbuu xirtay,war ninkii armaajo lafihiisii buu ubaxsaday markii uu kayabay awoda ciidamada sl,kkkkkk,caguhu waxka dayay.